प्रश्न B773ER समस्याहरु
2 वर्ष4महिना पहिले #294 by Dariussssss
ठीक छ, मसँग यहाँ नयाँ B773ER फिलिपिन्स छ, र हाइड्रोलिक्ससँग समस्या छ। एक प्रणाली, रिक्त देखिन्छ र कुनै पनि कुरा के गर्छ भने, यो जस्तो रहन्छ। यसको कारण, म बस जमीन मा बिरुद्ध र ब्रेक गर्न सक्षम रहयो हूँ। सबै कुरा ठीक देखिन्छ, यो राम्रो उड्छ।
माथिको ECAM स्क्रिनमा, हाइड्रोलिकहरूको साथ त्रुटिहरूको सूची हो। ती सबैसँग हाइड्रोलिक प्रणाली सीसँग केहि गर्न छ, र निचो ECAM मा, त्यो एक साँच्चै खाली छ।
मलाई पनि यहाँ देखि B772 प्याक छ, त्यहि VC सँग, तर बिना त्रुटिहरू।
त्यसोभए, यसलाई ठीक गर्न कुनै तरिका?
2 वर्ष4महिना पहिले #354 by Gh0stRider203
मर्मत गर्ने साथीहरूलाई आगो लगाउनुहोस्, र नयाँ क्रान्ति प्राप्त गर्नुहोस्?
सबै एकछिन मजाक ... दुर्भाग्यवश म यो पक्षी छैन, त्यसैले त्यहाँ धेरै गर्न सक्दैन।
के तपाईंले मौका पाएको सबै प्यानलहरू हेर्नुभयो?
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.233 सेकेन्ड